Amazon Queen avy WMS lalao dia mahazatra 20 payline slot ny sasany tena mangatsiatsiaka endri-javatra. Stacked tampon-tanety dia tena iray tamin'izy ireo. Ary ny tombony spins tany izay afaka ny mahatahotra 100 maimaim-poana spins. Ny tampon-tanety ho velona nandritra ny maimaim-poana manodidina spins manampy anao handresy ny sasany vola be. Noho izany, hiaraka Ny mpanjakavavy avy tany Amazons amin'ity lalao mahafinaritra slot avy WMS ho fahafahana handresy ny sasany vola be. Izany slot dia natao indrindra ho an'ireo mpilalao ireo manenjika be Fandresena.
Amazon Queen mpikamban'ny lalao hafa ao amin'ny lisitry ny mahazatra WMS Casino slot lalao ho aty amin'ny finday sehatra. Izany dia atao amin'ny alalan'ny iray amin'ireo sampan'ny orinasa ny WMS slots, Williams Interactive. The Queen ny tenany toa manaitra eo amin'ny lalao sy ny hafa sary tsipiriany manampy ny hatsaran'ny ny lalao.
Afaka miloka na aiza na aiza eo amin'ny 20p ny £ 60 amin'ny kofehy ireny rehetra izay mitovy amin'ny be dia be ny slot lalao.
Ny USP ny Amazon Queen dia tsy maintsy ho ny zava-misy fa milalao fomba roa. i.e amin'ny lafiny ankavia ho amin'ny ankavanana ary koa ny ankavanana amin'ny lafiny ankavia. Koa ny lalao mirehareha ny stacked tampon-tanety fipetrahana mampiseho izay mety hanampy anao handresy tena vola be. The an'ala ( ny riandrano mariky) hita eo ny miraingiraingy azon'ny 2 na miraingiraingy azon'ny 3 na miraingiraingy azon'ny 4 ary manolo ny hafa rehetra, afa-tsy ny Amazon marika famantarana Queen mba hanampy anao tanety ny nandresy fitambaran'ny.
Ny Amazon Queen no aelezo marika famantarana amin'ity lalao. Foana maso avy ho azy toy ny 3 na mihoatra noho 3 Amazon vadin'ny mpanjaka araka izay ho vokany sasany mahavariana Free Spins. Firy spins anao maimaim-poana mahazo sitrapony miankina impiry Amazon Queen marika hita. 3 sariohatra mandresy anao maimaim-poana folo spins raha 4 mandresy ianao 25 ary 5 Mampiely valiny in goavana 100 maimaim-poana spins tombony. The 10 ary 25 Free namoly tombontsoa dia tena mora ny mahazo raha mbola ny 100 Mety mila faharetana kely avy amin'ny lafiny.
Ny maimaim-poana ny tenany spins azo retriggered ary saika manam-petra. Izany no lafiny iray hafa mangatsiatsiaka io lalao.
Izany no iray nankany amin'ny ala mikitroka ianao, dia tsy te-tara!!
Amazon Queen dia faran'izay hira lalao avy WMS. Ny Fandresena dia goavana sy ny lalao mahaliana ihany ny hilalao. Get 3 rajako amin'ny mifanila reels ary mety hahita ny tenanao ho tahaka ny manan-karena tahaka ny Queen ny tenany. Ny faharetana no fanalahidin'ny io lalao, hiteraka zazalahy kely ity lalao ity valisoa faharetana amin'ny fomba mahatalanjona toy izany. Noho izany, aza malahelo io traikefa nahafinaritra tao anaty ala.